Warshad Emulsification - Shiinaha Soosaarayaasha Emulsification iyo Alaab
3000W mashiinka ultrasonic loogu talagalay nanoemulsion homogenizer emulsifier
Nanoemulsion ayaa marba marka ka dambeysa loo adeegsanayaa kiimikada, dawooyinka, qurxinta, cuntada, alaabada daryeelka caafimaadka, daabacaadda iyo warshadaha dheeh. Emulsification Ultrasonic wuxuu u kala jajabiyaa dhibco labo ama wax ka badan dareeraha ah iyada oo loo marayo 20000 gariir ilbiriqsi kasta, taasoo ka dhigeysa inay isku qasmaan midba midka kale. Isla mar ahaantaana, soosaarka joogtada ah ee emulsion isku dhafan ayaa ka dhigaya walxaha dhibcaha ah ee emulsion isku dhafan ay gaaraan heerka nanometerka. QAYBAHA: MUUQAALKA JH-BL5 JH-BL5L JH-BL10 JH-BL10L JH-BL20 JH -...
Qalabka emulsification firdhiska Ultrasonic
Qalabka Ultrasonic waxaa loo isticmaali karaa qurxinta waxaa loogu talagalay soo saarida, kala firdhinta iyo emulsification. JOOJINTA: Faa'iidada ugu weyn ee soo saarista ultrasonic waa isticmaalka dareeraha cagaaran: biyaha. Marka la barbardhigo dareeraha cuncunka badan ee loo isticmaalo soosaarida dhaqameedka, soo saarista biyaha waxay leedahay badbaado wanaagsan Isla waqtigaas, ultrasound wuxuu ku dhameystiri karaa soo saarista jawiga heerkulka hooseeya, isagoo hubinaya waxqabadka bayoolojiga ee qaybaha la soo saaray. QAYB: Xoog xiirid xoog leh oo la abuuray ...
qalabka wax soo saarka qurxinta ee ultrasonic
Isticmaal dareeraha cagaaran: biyaha.
Ku dhex miir jajabka qaybaha nano.
Si buuxda u dhexgal maaddooyinka kala duwan iyo hagaajinta waxtarka kiriimyada.
Biodiesel waa nooc ka mid ah shidaalka naaftada ee laga soo saaro dhirta ama xayawaanka waxayna ka kooban yihiin esters aashito dufan dheer leh. Waxaa caadi ahaan lagu sameeyaa iyadoo kiimikaad falcelin ka sameysan dufanka sida dufanka xoolaha (tallow), saliidda soybean, ama saliidda kale ee khudradda leh oo leh aalkolo, soo saarista methyl, ethyl ama propyl ester. Qalabka wax soo saarka biodiesel dhaqameedka waxaa lagu maareyn karaa oo keliya dufcado, taasoo keenta wax soo saar aad u hooseeya. Ku darista emulsifiers badan, dhalidda iyo tayada biodiesel waa ...
Qalabka emulsification Ultrasonic ee biodiesel
Biodiesel waa isku dar ah saliidaha khudradda (sida soybeans iyo abuurka gabbaldayaha) ama dufanka xoolaha iyo aalkolada. Runtii waa geedi socod tijaabin. Tallaabooyinka soosaarida Biodiesel ： 1. Isku qas saliidda cuntada ama dufanka xoolaha ee methanol ama ethanol iyo sodium methoxide ama hydroxide. 2. Kuleylka kuleylka dareeraha isku qasan ilaa 45 ~ 65 darajo Celsius. 3. Daaweynta Ultrasonic ee dareeraha isku dhafan ee kulul. 4. Isticmaal centrifuge si aad u kala soocdo glycerin si aad uga hesho biodiesel. QIIMEYNTA: MUUQAAL JH1500W-20 JH20 ...